UHANS i8 ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ပါ၊ ပါဝါ၊ မျက်နှာပြင်နှင့်အလွန်ကောင်းမွန်သောကင်မရာ | Androidsis
Rafa Rodríguez Ballesteros | | မိုဘိုင်း, reviews
Androidsis တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်စမ်းသပ်ရန်ဆိပ်ကမ်းအသစ်များလက်ခံခြင်းကိုမရပ်ပါ။ ယနေ့ခေတ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုရန်အတွက်ကံကောင်းသည် UHANS i8။ စျေးကွက်တွင်အသစ်သောစမတ်ဖုန်းများမည်သို့ပြုမူသည်ကိုအသုံးပြုခြင်းတွင်အတွေ့အကြုံအရှိဆုံးအတွေ့အကြုံမှသင့်အားပြောပြခြင်းသည် ၀ မ်းသာပါသည်။
ဤအချိန်တွင် UHANS တို့၏အလှည့်ဖြစ်သည်။ အခြားတရုတ်ကုမ္ပဏီ အရာစျေးကွက်အပေါ်ဖြန့်ချိနောက်ဆုံးပေါ်ဆိပ်ကမ်းနှင့်အတူအလွန်ကောင်းသောအလုပ်လုပ်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအရာကြွင်းလေကဲ့သို့အရည်အချင်း device ကိုကမ်းလှမ်းခြင်းအပေါ်အခြေခံပြီးနှင့် ကောင်းသောစျေးနှုန်းမှာ, စျေးကွက်ထဲမှာမင်းရဲ့နေရာကိုရှာပါ.
1 UHANS i8 သည်တုန်လှုပ်သွားသည်
1.2 UHANS i8 သည် USB type C ကိုလည်းလောင်းသည်
2 UHANS i8 အချက်အလက်စာရင်း
3 အရွယ်အစားနည်းသောမျက်နှာပြင်ပိုများနိုင်လား။ ဖြစ်နိုင်ပါသည်
5 Android 7.0 သည်အိမ်သုံးအမှတ်တံဆိပ်နှင့်ထိတွေ့မှုရှိသည်
6 UHANS i8 မှဓါတ်ပုံသည် Sony မှဖြစ်သည်
6.1 Smart Auto Mode ကိုဖွင့်ပြီးရိုက်ပါ
9 UHANS i8 သည် mono အသံနှင့်အခက်အခဲအချို့ရှိသည်
10 UHANS i8 နှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့ကြိုက်နှစ်သက်သောအရာများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့သိပ်မကြိုက်သည့်အရာများ
UHANS i8 သည်တုန်လှုပ်သွားသည်
UHANS i8 ကိုလက်ခံရရှိချိန်မှာသင့်မျက်လုံးကိုဖမ်းစားနိုင်သည့်ပထမဆုံးအချက်ကတော့၎င်းသည်သေတ္တာဖြစ်သည်။ က ထူထောင်စံကနေသွေဖည်ကြောင်းထုပ်ပိုး။ သိလိုစိတ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည့်အပြင်ဖုန်းကိုမကြည့်မီပင်ဗေဒတွင်သင်အနိုင်ရစေသည်။ ပုံမှန်ထက်အများကြီးပိုကြီးတဲ့သေတ္တာ, ဒါပေမယ့်အတန်ငယ်ပါးလွှာ။
UHANS i8 မှာရှိတယ်၊ စက္ကူပေါ်တွင်နံပါတ်များနှင့်စွမ်းဆောင်နိုင်မှုများသည်အရည်အချင်းပြည့်ဝသောစမတ်ဖုန်းတစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်သည်။ သင်၏မျက်နှာပြင်မှသင်၏ RAM၊ သင်၏ပရိုဆက်ဆာနှင့်သင်၏ကင်မရာများမှတဆင့်။ ရှေ့ကနေကြည့်ရတာအရမ်းကောင်းတယ်၊ အဲဒါကကျွန်တော်တို့ကိုစိတ်ပျက်စရာမရှိဘူးလို့ပြောရမယ်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်သက်သေခံနေကြသည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆင့်ကဲဖြစ်စဉ် အလွန်သိသာထင်ရှားတဲ့အလယ်အလတ်အကွာအဝေးမှပိုင်ဆိုင်သောတရုတ်စမတ်ဖုန်းများတွင်ဖြစ်သည်။ အလွန်သပ်သပ်ရပ်ရပ်ဒီဇိုင်းများ။ သီးသန့်ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများ။ နှင့်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာများမကြာသေးမီကသည်အထိကြီးတွေကုမ္ပဏီတွေရဲ့အကောင်းဆုံးဖုန်းများ၏ပြည်နယ်ခဲ့ကြသည်။
ကတူပုံရသည် ကျနော်တို့ကျိန်းသေပလပ်စတစ်မှနှုတ်ဆက်ပြောပါအနည်းဆုံးယခု။ နောက်ဘက်များမှာသံမဏိသို့မဟုတ်သတ္တုစပ်များဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ The ကွဲပြားခြားနားသောနည်းစနစ်များနှင့်အတူကုသဖန်။ ကျွန်တော်တို့ကိုအရမ်းပွတ်နှင့်အလွန်တောက်ပသောမိုဘိုင်းကိုကမ်းလှမ်းရန်။ ကြည့်ရတာအရမ်းကောင်းတယ်၊ ညစ်ပတ်တယ်။
UHANS i8 သည်စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးနှင့်တူကြောင်းတစ်ချိန်တည်းတွင်ထင်ရှားပေါ်လွင်ခဲ့သည် အနည်းငယ်သေးငယ်သည် ငါတို့မျှော်လင့်ထားတာထက် ထို့အပြင် ၅ နှင့် ၅.၅ လက်မအရွယ်ရှိစမတ်ဖုန်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်၎င်းသည်သိသိသာသာသေးငယ်သည် အရှည်နှင့်အကျယ်နှစ်ခုလုံး။ UHANS i8 တပ်ဆင်ထားသော်လည်းအလွန်ကောင်းမွန်သည် ၁.၂၆ လက်မမျက်နှာပြင်.
ဤသည်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ထွက်တင်ဆောင်လာသောအားဖြင့်သာဖြစ်နိုင်သည် ယင်း၏ရှေ့ panel နှင့်အတွင်းပိုင်းနှစ် ဦး စလုံးအာကာသ၏ optimization ကိရိယာ၏။ The မျက်လုံး ရလဒ် လက်တွေ့ကျကျမရှိသော။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ရှေ့ကင်မရာကို“ နေရာတွင်ထားခြင်း” အတွက်ဒီဇိုင်းပညာရှင်များကိုကျွန်ုပ်တို့ကျေးဇူးတင်ရပါမည်။
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရှုထောင့်ကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် UHANS သည် i8 နှင့်ကြီးမားသောအလုပ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ပြောရမည်။ ပစ္စည်းများရွေးချယ်မှုအလွန်အောင်မြင်သောဖြစ်ပါတယ် ကြီးစွန်းမှာ rounded ဒီဇိုင်းသည်။ ပြီးတော့ဖန်သားမျက်နှာပြင်နဲ့သူ့နောက်ကျောကိုသတ္တုဘောင်နဲ့ဖန်ခွက်ထဲထည့်သွင်းခြင်းကလည်းတောက်ပနေတယ်။ အချိန်ကုန်လွန်လာသည်နှင့်အမျှဤအရာများအပေါ်မည်သို့သက်ရောက်သည်ကိုသိရှိရန်စိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်လိမ့်မည်။
counterpoint အနေဖြင့်ဤအမျိုးအစားကိုများစွာသက်ရောက်စေသောအရာသည်ဖုန်ဖြစ်သည်။ အဆုံးအားဖြင့်၎င်းကိုဆုပ်ကိုင်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏သဲလွန်စများကိုချန်ထားလိမ့်မည်။ ငါတို့ကိစ္စတွင်အနက်ရောင် terminal နှင့်အတူ, အဲဒါကိုအပေါ်ခြေရာစွန့်မလွှဲမရှောင်ဖြစ်ပါတယ်။ စမ်းသပ်မှုများမပြုလုပ်ဘဲခြစ်ရာများနှင့်ခြစ်ရာများကိုလည်းအလွယ်တကူတွေ့မြင်နိုင်သည်။
အခြားဖြစ်ရပ်များတွင်၊ ဤစက်ပစ္စည်းများ၏ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောညစ်ညမ်းမှုနှင့်ပျက်စီးလွယ်သောအခြေအနေများအကြောင်းပြောပြီးနောက်အဖုံးကိုအသုံးပြုခြင်းအကြောင်းပြောခဲ့သည်။ မကြာသေးမီကထုတ်လုပ်သူများစွာသည်သေတ္တာထဲ၌ပါ ၀ င်လာကြသည်။ သို့သော်ထိုအရာသည် UHANS တွင်မပါ ၀ င်သောအရာဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့မှတ်ချက်ပေးမည့်အခြားအရေးကြီးသောအရာများဖြစ်သည်။
UHANS i8 သည် USB type C ကိုလည်းလောင်းသည်
ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏နောက်ဆုံးသုံးသပ်ချက်များနှင့်အတူတွေ့မြင်ခဲ့ကြသကဲ့သို့, ထုတ်လုပ်သူအားလုံးနီးပါးသည် USB type C ကိုရွေးချယ်ခဲ့ကြသည် အသစ်ကစမတ်ဖုန်းပေါ်မှာ။ အကျိုးကျေးဇူးများကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်စရာတစ်ခုခု။ UHANS i8 ဟာဒီထက်နည်းချင်ပြီးဒီလမ်းကြောင်းမှာလည်းပါဝင်လာသည်။
ဝမ်းနည်းစရာလည်း နားကြပ်အပေါက် input ကိုဖယ်ရှားပစ်ရန် option ကိုမှထပ်ပြောသည်။ အကြောင်းရင်းနှစ်ခုကြောင့်ဤရှုထောင့်ကိုအလေးပေးဖော်ပြခြင်း။ ပထမတစ်ခုကဖုန်းကိုအားသွင်းနေစဉ်အတွင်းသင်၏ချိတ်ဆက်ထားသောနားကြပ်များကို အသုံးပြု၍ မရတော့ပေ။ ဒုတိယတစ်ခုကသူတို့ကိုအသုံးပြုဖို့အတွက် adapter လိုအပ်ပါတယ်။
ကုမ္ပဏီအများစုသည်တူညီသောလမ်းအတိုင်းလျှောက်လှမ်းသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့လက်ခံနိုင်သည်။ သူတို့ကစျေးကွက်ကချမှတ်ထားသောခေတ်ရေစီးကြောင်းကိုလိုက်နာခြင်းသည်ပုံမှန်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ထုတ်လုပ်သူတစ် ဦး ကမကြာသေးမီကမရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်အထိ port ကိုနှိမ်နင်းရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါကကျွန်ုပ်တို့၏ပုံမှန်နားကြပ်များကိုအသုံးပြုရန်အတွက် adapter ကိုမဖြစ်မနေလိုအပ်သည်။ UHANS i8 box ထဲက adapter ကိုရှာမတွေ့ပါနဲ့.
၎င်း၏ထိပ်မှာဖြစ်ပါတယ် dual SIM ကဒ်အထိုင် နှင့်မှတ်ဉာဏ်ကဒ်အဘို့။ ၎င်း၏ညာဘက်အခြမ်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်သာတွေ့မြင်နိုင်သည် သော့ခတ်ပြီးခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ.
ပြီးတော့ဘယ်ဘက်ခြမ်းမှာကျွန်တော်တို့ရှိတယ် အသံအတိုးအကျယ်ထိန်းချုပ်မှု။ ဤကိစ္စတွင်၎င်းတို့သည်အခြားတာ ၀ န်များသတ်မှတ်ခြင်းအပြင်အသံတိုးမြှင့်ခြင်းသို့မဟုတ်လျှော့ချခြင်းပြုလုပ်နိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောရှည်သောခလုတ်တွင်ပြသထားသည်။
UHANS i8 အချက်အလက်စာရင်း
ဖန်သားပြင် ၅.၇ IPS HD LCD
Processor ကို MediaTek MT6750T
နောက်ကင်မရာ dual-16 Mpx +3Mpx
ဘက်ထရီ 3500 mAh ဘက်ထရီ
အလေးချိန် 202 ဂရမ်
စြေး 154.13 €
ဝယ်ယူရန်လင့် UHANS i8 ကိုဝယ်ပါ
UHANS i8 မျက်နှာပြင်သည်၎င်းကိုဖန်တီးသူများ၏စစ်မှန်သောအောင်မြင်မှုဖြစ်သည်။ ၎င်း၏အရွယ်အစားနှင့်သိသိသာသာသေးငယ်သည့်စမတ်ဖုန်းကိုယ်ထည်သို့ပေါင်းစည်းခြင်းကြောင့်။ သေးငယ်တဲ့စမတ်ဖုန်းကိုသင့်လက်ထဲမှာကိုင်ထားခြင်းသည်အကြိမ်များစွာအဆင်ပြေသည်။ ဒါပေမယ့်ကောင်းမွန်တဲ့အရွယ်အစားရှိတဲ့မျက်နှာပြင်ကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ပိုကောင်းလိမ့်မယ်။
မျက်နှာပြင် ၅.၇ လက်မ IPS LCD သည် HD resolution 5,7 x 720 px ရှိပြီးပျမ်းမျှသိပ်သည်းမှုနှုန်းမှာတစ်လက်မလျှင် ၂၈၂ pixels ဖြစ်သည်။ ဖန်သားစွန်း၏အဆုံးသတ်အဆုံးနှင့်၎င်း၏လက်တွေ့ကျကျမရှိသော visors များသည်ဘောင်အတွင်းပေါင်းစည်းမှုကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်စေသည်။ ပြီးတော့ 79% ၏ရှေ့ panel ကိုထေိုအချိုးကျနော်တို့ကအများကြီးကမ်းလှမ်းရန်ဆန္ဒရှိအခြား "အားလုံးမျက်နှာပြင်" ရင်ဆိုင်နေရသည်။
La ကမ်းလှမ်းထားသောအရောင်များနှင့်အရိပ်များ၏အရည်အသွေးသည်အမှန်ပင်ဖြစ်သည်။ ပြီးတော့အပြင်ဘက်မျက်နှာပြင်ကိုဖတ်နိုင်ဖို့တောက်ပမှုဟာလုံလောက်မှုမရှိပါဘူး။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အလွန်ကောင်းမွန်သောသုံးစွဲသူအတွေ့အကြုံကိုအပြည့်အဝခံစားနိုင်သည့်မျက်နှာပြင်တစ်ခုသံသယမရှိပါ။
Android ၏ကိုယ်ပိုင် capacitive navigation ခလုတ်များသည်ဖန်သားပြင်အတွင်းတွင်တည်ရှိသည်။ ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကသူတို့ကိုပုန်းရှောင်နိုင်အောင်လွယ်ကူစွာပြန်မြင်စေနိုင်သည်။ ၎င်းသည်အခြားစက်များနှင့်အတူဖြစ်သကဲ့သို့မျက်နှာပြင်၏အစိတ်အပိုင်းကို "မစား" ပါ။ ဒါကြောင့်မျက်နှာပြင်အပြည့်ကသူတို့တစ်ဖက်ကိုစိတ်အနှောင့်အယှက်မဖြစ်ပါဘူး။ ၅.၇ လက်မကိုအပြည့်အဝခံစားနိုင်မှာပါ။
မျက်နှာပြင်အရွယ်အစားသည်ငါးလက်မကျော်ကျော်ကျိန်းသေပြီးပြီဖြစ်သည်။ လက်ရှိတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်စမတ်ဖုန်းတွင်ရုပ်ရှင်သို့မဟုတ်စီးရီးကိုကြည့်ရှု။ မရနိုင်ပါ။ ရုပ်ရှင်ကိုပုံမှန်ကြည့်ရှုမည့်စက်မဟုတ်ပါ။ သို့သော်တိကျသောအခါသမယများတွင်၎င်းသည်ကျေးဇူးတင်ပါသည် 18:9ရှုထောင့်အချိုး.
UHANS i8 သည်မည်သည့်အလုပ်တွင်မဆိုကောင်းစွာအလုပ်လုပ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းကိုတစ်ချိန်တည်းနာရီပေါင်းများစွာအသုံးပြုခြင်းဖြင့်မည်သည့် "ဆွဲကြိုး" ကိုမျှမခံစားခဲ့ရပါ။ ထို့အပြင်၎င်းသည်အသုံးပြုနေစဉ်သိသာသောအပူလွန်ကဲမှုဒဏ်ခံစားနေရသောစမတ်ဖုန်းမဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အချိန်တိုင်းချောမွေ့ပြီးအကျိုးရှိစွာလည်ပတ်စေသည်။
UHANS သည်ဝတ်ဆင်ရန်ရွေးချယ်သည် MediaTek ပရိုဆက်ဆာ။ အထူးသ, သင့်ရဲ့မော်ဒယ် MT6750Tကျွန်ုပ်တို့မကြာသေးမီကစမ်းသပ်နိုင်ခဲ့သည့်စမတ်ဖုန်းကိုမှီခိုသည့်ပရိုဆက်ဆာတစ်ခု၊ ၎င်းသည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်အလုပ်လုပ်သည်။ အဆိုပါ vkworld S8။ un octa-core ဖြစ်သည် လေး core ကိုမှာအလုပ်လုပ်သော 1.5 GHz အမြန်နှုန်းနှင့်အခြားလေးရန် 1.0 GHz အမြန်နှုန်း.
အင်္ဂါရပ်တွေ 4GB RAMကြည့်ချင်တဲ့အရာ။ အကယ်၍ မကြာသေးမီက2Gb RAM ရှိသည့်စက်ကိုကြည့်ခြင်းသည်ပုံမှန်အတိုင်းဖြစ်သည်။ အားလုံးနီးပါးကိစ္စများတွင်ယနေ့ငါတို့နှစ်ဆပြောကြသည်။ သူတို့ကမ်းလှမ်းသော solvency နှင့်တုန့်ပြန်မှုတို့တွင်သိသာသောသံသယမရှိသောအရာတစ်ခုခု။
သိုလှောင်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ နိမ့်ဆုံးစွမ်းရည်သည်မည်သို့တိုးပွားလာသည်ကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်နိုင်သည်။ ကံကောင်းထောက်မစွာကျွန်ုပ်တို့သည် 16 Gb နီးပါးမလုံလောက်လောက်သည့်အချက်ကိုကျွန်ုပ်တို့မရပ်နိုင်တော့ပါ။ UHANS i8 သည်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုပေးစွမ်းသည် 64 Gb သိုလှောင်မှုမှတ်ဉာဏ်ကဒ်ဖြင့်ချဲ့ထွင်နိုင်သည်။ UHANS i8 တွင်အရာရာတိုင်းအတွက်နေရာရှိသည်။
MediaTek MT6750T သည်၎င်း၏ဘက်စုံသုံးမှုကြောင့်ကောင်းမွန်စွာအောင်မြင်ခဲ့သည့်အရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ စမတ်ဖုန်းကြီးမှာမျက်နှာပြင်ကြီးကြီးနဲ့မျှော်လင့်ထားတာထက်ပိုပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ပေးတယ်။ ဆောင်ရွက်ခြင်း စွမ်းအင်အသုံးစရိတ်၏အလွန်ကောင်းသောစီမံခန့်ခွဲမှု။ ကျွန်ုပ်တို့အမြဲပြောခဲ့သလိုပင်စမတ်ဖုန်း၏ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်သည်၎င်းသည်၎င်း၏ဘက်ထရီစွမ်းရည်အပေါ်တွင်သာမူတည်သည်မဟုတ်ပါ။
Android 7.0 သည်အိမ်သုံးအမှတ်တံဆိပ်နှင့်ထိတွေ့မှုရှိသည်
ကျနော်တို့ကြော်ငြာ nauseam, စိတ်ကြိုက် NO အလွှာကထပ်ခါတလဲလဲ! Android အတွက်အသုံးပြုတာကကိုယ်ဝန်ဆောင်ထားသလိုပဲ။ မဖြစ်နိုင်လျှင်အလှဆင်ခြင်းနည်းလေလေဖြစ်သည်။ UHANS i8 ၏ဖြစ်ရပ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိရသည် အနည်းငယ်သာထိတွေ့နိုင်သော Android.
ကံကောင်းထောက်မစွာကျနော်တို့ကပြောနိုင်ပါတယ် စိတ်ကြိုက်အလွှာ ငါတို့တွေ့ပြီလုံးဝ ဗေဒ။ ထိုအရာကုမ္ပဏီတစ်ခုက၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အိုင်ကွန်များနှင့် menu ကိုသေးငယ်တဲ့ခွဲခြားရန်ရိုးရှင်းစွာကမ်းလှမ်းချင်သောအရာတစ်ခုခုသည်။ Setting ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်၎င်းတို့နှင့်အရာအားလုံးဖြစ်ပြီး Android တွင်ရနိုင်သည်။
ထို့ကြောင့် အလွန်အလင်းပုဂ္ဂိုလ်ရေးအလွှာ ငါတို့မကောင်းသောအရာတစုံတခုကိုမျှမပြောနိုင်သောအကြောင်းကို။ အနည်းဆုံးတော့ကျွန်ုပ်တို့ဟာအရသာတစ်စုံတစ်ရာဒါမှမဟုတ်အခြားရူပဗေဒတစ်ခုအတွက်ရရှိနိုင်မယ့်အရသာထက်ကျော်လွန်နေပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်ပိုင်ဂူဂဲလ်ထက်ကျော်လွန်သောကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ကြိုတင်ထည့်သွင်းထားသောအပလီကေးရှင်းများကိုလည်းရှာမတွေ့ပါ။
UHANS i8 မှဓါတ်ပုံသည် Sony မှဖြစ်သည်
UHANS ကလည်းဒီသင်ခန်းစာကိုသင်ယူခဲ့ပုံရသည်။ အတိအကျ တရုတ်မိုဘိုင်းဖုန်းထုတ်လုပ်သူတွေကသူတို့ရဲ့ပုံရိပ်ကိုဆေးကြောချင်ကြတယ် ဒီရှုထောင့်၌တည်၏။ ပြီးတော့တခြားဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့ထုတ်လုပ်သူတွေကိုသူတို့ရဲ့ကင်မရာတွေအတွက်လောင်းတဲ့ကုမ္ပဏီတွေအများကြီးရှိတယ်။ ဒါဆိုရင် UHANS သည် Sony မှ၎င်း၏ i8 ကိုအလွန်ဂုဏ်သိက္ခာရှိသောကင်မရာများတပ်ဆင်ရန်ရွေးချယ်သည်.
ပုံမှန်အတိုင်းမကြာသေးမီကကျွန်ုပ်တို့တွင်ရှိသည် ကျောဘက်မှာ dual ဓာတ်ပုံကင်မရာ။ နှင့် Sony 16MP နှင့် 3MP အာရုံခံကိရိယာနှစ်ခုအသီးသီး၊ စမတ်ဖုန်းကိုအရည်အသွေးပြည့်မှီအောင်စီမံခန့်ခွဲနိုင်ဖို့အတွက်ဓာတ်ပုံအပိုင်းကကြီးမားတဲ့ထင်ရှားကျော်ကြားမှုကိုရရှိစေတယ်။
ရှေ့တွင်ကျွန်တော်တစ် ဦး ရှိသည် 8MP selfie ကင်မရာ။ အကောင်းဆုံး Self- ဓာတ်ပုံများရိုက်ကူးရန်အတွက်လုံလောက်သော resolution ထက်ပိုသည်။ ကျွန်တော်တို့စမ်းသပ်နိုင်ခဲ့သည့်နောက်ဆုံးပေါ်စမတ်ဖုန်းများနှင့်အတွေ့အကြုံများအပြီးတွင်ရှေ့ကင်မရာကိုတွေ့ရခြင်းသည်တန်ဖိုးထားလေးမြတ်ပါသည် ၎င်း၏အထက်ပိုင်းတွင်တည်ရှိသည်။ အမြဲတမ်းဖြစ်ခဲ့တာနဲ့ဘယ်နေရာကိုငါတို့ကမှန်ကန်တဲ့နေရာလို့သတ်မှတ်ခဲ့တာလဲ။
ယင်းကြောင့် ရှပ်တာငါတို့ပြောရမယ် ကျနော်တို့က၎င်း၏မြန်နှုန်းအားဖြင့်ပီတိအံ့အားသင့်ခဲ့ကြပြီ။ အော်တို mode မှာဘယ်လိုကြည့်ဖို့အံ့သြစရာပါပဲ ပင်ရွေ့လျားမြင်ကွင်းများအတွက်perfectlyုံအာရုံစိုက် သူတို့ကိုအေးခဲပုံနှင့်အလွန်လျောက်ပတ်သောအရည်အသွေးနှင့်အတူအောင်။ အလင်းကိုဆန့်ကျင်သောဓာတ်ပုံ၌ဤအခြေအနေဖြစ်ပေါ်စေသည့် "burn out" effect နှင့်ကျွန်ုပ်တို့ရလဒ်ကောင်းရရှိသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်နိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ရှုခင်းများရိုက်ကူးခြင်းသို့တက်ရောက်ပါကသို့မဟုတ် ပြင်ပဓာတ်ပုံ ကောင်းမွန်သောသဘာဝအလင်းရောင်တွင်ရလဒ်များသည်အရည်အသွေးနှင့်အဓိပ္ပါယ်ကိုပြသသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ငါတို့ရှိသည် အကောင်းဆုံးရှင်းလင်းပြတ်သားခြင်းနှင့်အဖြူချိန်ခွင်လျှာ အရောင်များကိုလက်တွေ့ကျပြီးအလွယ်တကူခွဲခြားသိမြင်နိုင်သည်။
Smart Auto Mode ကိုဖွင့်ပြီးရိုက်ပါ
ဓာတ်ပုံအားလုံးသည်အလိုအလျောက်လည်ပတ်မှုဖြင့်ရိုက်ယူပြီးဖြစ်သည်။ ပြီးတော့ငါတို့ဘယ်လိုကြည့်တယ်၊ တိကျသောလက်စွဲစာအုပ်ချိန်ညှိချက်များထည့်ရန်မလိုပဲကျွန်ုပ်တို့သည်အခြေအနေအမျိုးမျိုးတွင်ကောင်းသောဖမ်းယူမှုများရရှိသည် အလင်း, တည်နေရာသို့မဟုတ်လှုပ်ရှားမှု၏။ သံသယမရှိဘဲ, ထိုကင်မရာကို အပြည့်အဝနှင့်perfectlyုံကျွန်တော်တို့ရဲ့လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်တွေ့ဆုံ။ ပိုမိုအဆင်ပြေသောအချက်မှာ၎င်းသည်အခိုက်အတန့်အားအလိုအလျောက်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်သည်
ဓါတ်ပုံရိုက်ခြင်း အတုအလင်းနှင့် foreground အတွက်အာရုံစူးစိုက် တစ်ခုအရာဝတ္ထုရရှိသောရလဒ်များကိုလည်းကောင်းလှ၏။ ကျွန်ုပ်တို့မှာအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကောင်းမွန်ပြီးကြည်လင်တဲ့ကင်မရာကောင်းတယ်။ ငါတို့ဖမ်းယူပြုပါလျှင် ရှေ့တန်းနှင့်ကောင်းသောသဘာဝအလင်းတွင်အာရုံစူးစိုက် ဓာတ်ပုံတွေဟာအထင်ကြီးစရာကောင်းတယ်။ အရောင်များ၏သရုပ်မှန်၊ resolution နှင့်ကြည်လင်ပြတ်သားမှုသည်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကင်မရာဖြင့်ရိုက်ထားသောဓာတ်ပုံကိုမငြိတွယ်စေပါ။
အင်္ဂါရပ်တွေ built-in flash ကို, တည်ရှိသည်သော ကင်မရာဘေးမှာ။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်နှစ်ခုမျက်ကပ်မှန်အကြားထက်တ ဦး တည်းအခြမ်းမှတည်ရှိသည်။ ကျနော်တို့ကင်မရာအချို့ကိုမှန်ဘီလူးများအကြား built-in flash နှင့်အတူစမ်းသပ်နိုင်ပါပြီ။ ထို့အပြင်၎င်းသည်တစ်ခါတစ်ရံတွင်ပိုမိုပြင်းထန်သောအလင်းဖမ်းယူမှုများအပေါ်အပျက်သဘောသက်ရောက်စေသောမီးပွားများကိုမည်သို့ဖြစ်ပေါ်စေသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့လေ့လာသည်။
La ကင်မရာအက်ပ် ၎င်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်တစ်ဖက်သို့မဟုတ်တစ်ဖက်သို့လျှောခြင်းဖြင့်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ဗွီဒီယို၊ ဓာတ်ပုံ၊ မြင်ကွင်းကျယ်သို့မဟုတ် SLR ။ ငါတို့မှာလည်းဖက်ရှင်တစ်ခုခုရှိတယ်၊ ရွေးစရာလည်းရှိတယ် "မျက်နှာအလှအပ"။ ပွတ်သပ်ခြင်း၊ ဆန့်ခြင်း၊ ဓာတ်ပုံရိုက်သောအခါသင်အသုံးပြုနိုင်သောအထူးပြုလုပ်ချက်များကိုသင်နောက်သို့ပြန်မလိုတော့ပါ။
UHANS i8 ကကျွန်တော်တို့ကိုကင်မရာတန်ဘိုးထက်ပိုပြီးပေးပါတယ်။ သူကပေးတဲ့ megapixel resolution ကသာကောင်းပါတယ်။ ကျနော်တို့စမ်းသပ်ပြီးသောကွဲပြားခြားနားသောအခြေအနေများတွင်၎င်း၏အပြုအမူအမြဲအပြုသဘောဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒီစမတ်ဖုန်းကိုဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့အခိုင်အမာဆုံးဖြတ်ထားတယ်၊ ဒါကအမြဲတမ်းအောင်မြင်မှုရဲ့အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ဖြစ်တယ်။ တရုတ်ဖုန်းများသည်ကောင်းမွန်သောကင်မရာများအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲခဲ့သည်ကိုရှင်းလင်းသောဥပမာတစ်ခု.
ဘက်ထရီအပိုင်းနေဆဲဖြစ်သည် အနာဂတ်ဝယ်လက်များပိုမိုကြည့်ရှုနေသောအရေးကြီးသောလက္ခဏာတစ်ခု။ မကြာသေးမီလများအတွင်းက၎င်းသည်ယခင်ကထက် ပို၍ အရေးကြီးလာသည်။ အသုံးပြုသူများသည်အချို့သောလုပ်ပိုင်ခွင့်များချမှတ်ခြင်းဖြင့်ပင်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ပိုလိုချင်ကြသည်။
ကျွန်ုပ်တို့နှင့်စမတ်ဖုန်းများတိုင်းတွင်ရှိသည် ပိုကြီးတဲ့ဖန်သားပြင်။ ပြီးတော့ဒါကဆိုပါစို့ စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုတိုးပွားလာ။ ဘက်ထရီများသည်တူညီသောနှုန်းဖြင့်ကြီးထွားရန်လိုအပ်ပြီး၎င်းတို့သည်သေးငယ်သည့်ဖန်သားပြင်များနှင့်အတူပေးထားသောကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကိုပေးနိုင်ရန်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်မည်သည့်နည်းနှင့်မျှထိခိုက်မှုမရှိဘဲပိုမိုကြီးမားသောမျက်နှာပြင်များနှင့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရရှိရန်အလွန်ခက်ခဲသည်။
တစ်ဦးအတွက် စစ်တမ်းကိုမကြာသေးမီကကျွန်ုပ်တို့၏လူမှုကွန်ယက်များမှတဆင့်ပြုလုပ်ခဲ့သည် ကျနော်တို့သိသာထင်ရှားသောရလဒ်များကိုရရှိခဲ့သည်။ မေးခွန်းမတိုင်မီ ပိုမိုကြီးမားသောကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်အတွက်လဲလှယ်ရန်အတွက်သင်ကလေးလံသောစမတ်ဖုန်းကိုသယ်ဆောင်လိုပါသလား။ ရလဒ်များလွှမ်းမိုးသောခဲ့ကြသည်။ ဖြေဆိုသူ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းကဖြေကြားသည်.
El UHANS i8 ၎င်းသည်အထွေထွေအများပြည်သူတောင်းဆိုသည့်အရာများအတွင်းရောက်သည် ပူဇော်သက္ကာနှင့်လိုက်နာသည် ပိုကြီးတဲ့ဘက်ထရီသင့်ရဲ့မျက်နှာပြင်ရဲ့စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကိုလျှော့ချဖို့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေနဲ့။ ဒါ့အပြင်စမတ်ဖုန်းကိုအနည်းငယ်စဉ်းစားကြည့်နိုင်ပါတယ် ပိုလေးတယ် ကြွင်းသောအရာထက်။ ငါတို့စမ်းသပ်နိုင်သောအခြားကိရိယာများလောက်မများသော်လည်း။
တစ်ဦးနှင့်အတူ 3.500 mAh ဘက်ထရီအလွန်ကြီးမားသည်မဟုတ်၊ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားအလွန်ကောင်းမွန်သောကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကိုပေးစွမ်းနိုင်သည်။ နံနက် ၈ နာရီမတိုင်မှီဖွင့်သောနေ့ရက်ကာလအတွင်းစက်ပစ္စည်းကိုမြင့်မားစွာအသုံးပြုခြင်းနှင့်အတူ ၂၀% အောက်အောက်တွင်သာရှိသည်။ သင့်ဘက်ထရီ ဒါဟာကျွန်တော်တို့ကိုတစ်နေ့လုံးလုံးချောချောမွေ့မွေ့ဖြစ်စေသည်။
အကယ်၍ သင်၏စမတ်ဖုန်းကိုအသုံးပြုခြင်းသည်များစွာနည်းပါက UHANS i8 သည်နှစ်ရက်လုံးလုံးအားသွင်းစရာမလိုဘဲကြာရှည်ခံနိုင်သည်။ ဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အလွန်အမင်းလေးလံသောဖုန်းအကြောင်းပြောနေခြင်းမဟုတ်ကြောင်းသုံးသပ်ခြင်းရလဒ်ကောင်း။ ထိုအရာဖြစ်စေထူထပ်ဘာမှမဟုတ်ပါဘူး။ ထို့ကြောင့် UHANS i8 အတွက်ဘက်ထရီကဏ္inတွင်မှတ်သားသင့်သည်။
UHANS i8 တွင်အများအပြားရှိသည် အကြောင်းအရာကိုလုံခြုံအောင်ထိန်းသိမ်းရန်နည်းလမ်းအမျိုးမျိုး အတူတူ။ ငါတို့သိသည့်အတိုင်း၊ Android operating system ကိုယ်နှိုက်တွင်ဂဏန်းကုဒ်နံပါတ်သို့မဟုတ်သော့ဖွင့်ခြင်းပုံစံရှိသည်။ သို့သော်လုံခြုံရေးအတွက်ဤစနစ်များကို extras နှစ်ခုဖြင့်အကောင်အထည်ဖော်သည်။
ငါတို့မှာaနောက်ဘက်တွင်လက်ဗွေဖတ်စက်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အကောင်းဆုံးကိုစဉ်းစားသောနေရာတွင်ဖြစ်သည်။ ခန္ဓာဗေဒအရမသက်မသာဖြစ်သောရှေ့ပိုင်းတွင်မဟုတ်ပါ။ မှန်ဘီလူးများကိုလက်ဗွေကင်းစင်စေရန်ကင်မရာသို့မဟုတ်လျှပ်တပြက်နှင့်ကိုက်ညီမှုမရှိပါ။ အပြင်, သူ့ အဖြေကကောင်းတယ် ကျနော်တို့ထိရောက်သောသော့ဖွင့်အောင်မြင်ရန် 0,1 စက္ကန့်.
ငါတို့တွင်လည်းအဆင့်မြင့်သောစနစ်တစ်ခုရှိသည် မျက်နှာအသိအမှတ်ပြုမှု။ ၎င်းကိုဖွင့်ရန်ဖုန်းသည်ရှေ့ကင်မရာနှင့်ဓာတ်ပုံတစ်ပုံမျှသာလိုအပ်သည်။ ဒါကြောင့်ငါတို့မျက်နှာနှင့်အတူဖုန်းကိုသော့ဖွင့်နိုင်ပါတယ်။ သော့ဖွင့်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီးကင်မရာကိုအမှီပြုခြင်းဖြင့်ဤကိရိယာသည်သော့ဖွင့်နေသည်။
အမှန် သော့ဖွင့်အလုပ်ဖြစ်တယ်။ ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီးဖုန်းကိုကျွန်ုပ်တို့မျက်နှာသို့ညွှန်ပြရန်လိုအပ်သော်လည်း၊ သော့ဖွင့်ခြင်းသည်မြန်သည်။ ပြဿနာ ဒီလုပ်ဆောင်ချက်ဟာမျှော်လင့်ထားတာထက်ပိုပြီး \_ t အခြားသူတစ် ဦး နှင့်လည်းအလုပ်လုပ်သည် သောကင်မရာမှတ်တမ်းတင်ထားသော။ ဒီအဆင့်မြင့်စနစ်ကိုအမှန်တကယ်အန္တရာယ်ဖြစ်စေတဲ့အရာ အလွန်စိတ်မချရ.
** ဓာတ်ပုံမျက်နှာ၏အသိအမှတ်ပြုမှု **
ငါတို့အားလုံးသည်ကျွန်ုပ်တို့၏စမတ်ဖုန်းတွင်နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာကိုပိုင်ဆိုင်လိုကြသည်။ Face ID လို့ Apple ကခေါ်တဲ့နည်းပညာဟာဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်။ သို့သော်၎င်းသည်ကမ်းလှမ်းထားသောလုံခြုံရေးအဆင့်ကိုမြင်လျှင်၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုနည်းပါးနေသေးသောနည်းပညာကိုထည့်သွင်း။ မရရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုနိုင်သည်။ ပြီးတော့အဲဒါကိုအဆင့်မြင့်တဲ့စနစ်တစ်ခုအဖြစ်ကြေငြာလိုက်တာကငါတို့ရဲ့ထောက်လှမ်းရေးကိုစော်ကားမှုပဲ။ ပိုပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသောဂန္ကုဒ်သို့မဟုတ်ပုံစံ, ဒါမှမဟုတ်၏သင်တန်း, လက်ဗွေ။
UHANS i8 သည် mono အသံနှင့်အခက်အခဲအချို့ရှိသည်
အသံအပိုင်းမှာပေးကမ်းခြင်းအားဖြင့်စတင်ခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ရှောင်ရှားနိုင်ပါတယ် လက်ကောက်ဝတ်အပေါ်ရိုက်ပုတ် UHANS ကိုသူတို့ box ထဲမှာထည့်ရန် "မေ့" တစ်ခုခုအတွက် မည်သည့်ထုတ်လုပ်သူမှမျှနားကြပ်များမပါ ၀ င်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့နီးပါးသိထားသည်။ Terminal ၏စျေးနှုန်းအပြိုင်အဆိုင်နိမ့်ကျခြင်းမရှိခြင်းသည်၎င်းအားအမြဲတမ်းတွေ့ရလေ့မရှိသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့နားလည်နိုင်ပါသည်။
ဒါဟာအစလမ်းကြောင်းသစ်ပုံရသည် ၃.၅ မီလီမီတာအပေါက်နားကြပ်ကိုထည့်သွင်းပါ။ အခြားတစ်ခုခုမရှိလျှင်တစ်ခုခုကိုလုပ်ရလိမ့်မည်။ သို့သော်အနည်းဆုံးထည့်သွင်းရန်မဖြစ်မနေလိုအပ်သည် ကျွန်တော်တို့ရဲ့နားကြပ်ကိုအသုံးပြုရန်အတွက် adapter cable ကို။ တစ် ဦး ကသေးငယ်တဲ့ cable ကို UHANS i8 သည်သင်၏ smarphone တွင်မပါ ၀ င်ပါ.
ကျနော်တို့ခြိုးခြံခြွေတဲ့ပြပွဲအတွက်သူတို့ကမလိုအပ်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ကြလိမ့်မည်ဟုဆိုပါစို့ ဒီလိုဖြစ်ပေမယ့်သူတို့ကသူတို့ရဲ့စမတ်ဖုန်းကို ၀ ယ်တဲ့သူတွေကို adapter သီးခြားဝယ်ဖို့အတင်းအကျပ်တောင်းဆိုနေကြတယ်။ တေးဂီတကိုစိတ်အနှောင့်အယှက်မဖြစ်စေဘဲအရှုံးမပေးစေလိုလျှင် Bluetooth နားကြပ်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်လိုသည်။
စပီကာများ၏ UHANS i8 အကြောင်း ၎င်းတွင်အောက်ခြေတွင်ရှိသောစပီကာတစ်ခုသာရှိသည် အားသွင်း connector ကိုဘေးမှာ။ ဖုန်းဖြင့်ဂိမ်းကစားစဉ်အလွယ်တကူပိတ်ဆို့ရန်လွယ်ကူသောနေရာတစ်ခု။ တိတ်တဆိတ်အလုပ်လုပ်သောအသံချဲ့စက် ၎င်းသည်အလွန်အစွမ်းထက်သည်မဟုတ်သော်လည်း၎င်း၏အဆင့်တွင်တုန်ခါမှုသို့မဟုတ်ပုံပျက်ခြင်းမရှိပဲရှင်းလင်းသောအသံကိုပေးသည်။
ကျနော်တို့ကြောင်းအပြုသဘောစဉ်းစားကြောင်းပြောရန်ရှိသည် UHANS i8 တွင် FM ရေဒီယို tuner ပါ ၀ င်သည်။ ဒါပေမယ့်စိတ်ဝင်စားဖို့ကနားကြပ်လိုတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်မရရှိနိုင်သည့်အရာ။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့တွင်ရှိပါကကျွန်ုပ်တို့တွင်လိုအပ်သည့် adapter မရှိသောကြောင့်၎င်းတို့ကို plug လုပ်လို့မရပါ။ ကျွန်ုပ်တို့မြင်တွေ့ရသောအခြားကောင်းသောအရာများစွာကိုဖုံးကွယ်ထားနိုင်သည့်သေးငယ်သောအမှားတစ်ခု။
UHANS i8 နှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့ကြိုက်နှစ်သက်သောအရာများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့သိပ်မကြိုက်သည့်အရာများ
အရွယ်အစား ၏ UHANS i8 ၏လက်တစ်ဖက်တည်းဖြင့်ကိုင်ထားသောအခါသင်၏မျက်စိကိုပထမဆုံးဖမ်းစားနိုင်သည့်ဆွဲဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ တကယ်တော့သူက ၅ လက်မမျက်နှာပြင်ဒါမှမဟုတ်ဒီထက်နည်းတဲ့စမတ်ဖုန်းနဲ့တူနေနိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့်ငါတို့တွေ့ခဲ့ရသလိုပါပဲ။ အသုံးပြုရတာကောင်းပါတယ် ငါတို့လက်ဖြင့်ဆုပ်ကိုင်နိုင်သည့်ဖုန်းတစ်လုံး လုံးဝကြီးမားတဲ့မျက်နှာပြင်တက်ပေးခြင်းမရှိဘဲ။
အရွယ်အစား သင့်မျက်နှာပြင်။ UHANS i8 ၏ဒီဇိုင်းအတွက်တာ ၀ န်ယူသူများသည်မျက်နှာပြင်တစ်ခုအား "embed" လုပ်နိုင်ခြင်းအတွက်ဂုဏ်ယူသင့်သည်။ 5,7 လက်မ ထိုကဲ့သို့သောသေးငယ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ။ ရုပ်ပုံအရည်အသွေး, မျက်နှာပြင်ပုံစံ 18:9ထို့အပြင်၎င်း၏ rounded edges များကြောင့် frame နှင့်အတူအပြည့်အဝပေါင်းစည်းခြင်းကစမတ်ဖုန်းများစွာတွင်ထင်ရှားပေါ်လွင်စေသည်။
ဒါဟာနီးပါးပြီးပြည့်စုံသောဖော်ပြရန်ကျိုးနပ်သည် ရှေ့ panel ကိုသုံးနိုင်သည် အလွန်မြင့်မားသောထေိုအချိုးအစားနှင့်အတူမျက်နှာပြင်နှင့်အတူ။ သူတို့၏အဆုံးများ၌ကျွန်ုပ်တို့တွင်မရှိသလောက်သောဘောင်များရှိပြီး၊ သူတို့၏အပေါ်နှင့်အောက်ဘက်တွင်၎င်းတို့တွင်လိုအပ်သောအစိတ်အပိုင်းများကိုရှာဖွေရန်အနည်းဆုံးအရွယ်အစားရှိသည်။
သူတို့၏ ကင်မရာ။ ကွဲပြားခြားနားသောအလင်းနှင့်အလင်းရောင်အခြေအနေများတွင်စမ်းသပ်မှုများပြုလုပ်ပြီးနောက်ကင်မရာသည်၎င်းတို့အားလုံးတွင်ကောင်းစွာကာကွယ်ခဲ့သည်။ ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းမွန်တဲ့ရလဒ်တွေကိုချိန်ဆစရာမလိုဘဲအလိုအလျောက် mode ကိုအမြဲအသုံးပြုနေပါတယ်။ Sony ၏အရည်အသွေး စတုတ္ထထောင့်အဘို့။
ရွေးချယ်မှု ဂျက် connector ကိုဖယ် နားကြပ်တွေအတွက်တော့မကြိုက်ဘူး ငါတို့လည်းမကြိုက်ဘူး မရှာပါနဲ့ box ထဲမှာ, များစွာသောအခြားစမတ်ဖုန်းများကဲ့သို့အချို့ နားကြပ် လက်ဆောင်ပေးမယ် ဒါပေမယ့်နောက်ဆုံးကောက်ရိုးကဘာလဲ မဟုတ်ပါ ထည့်သွင်းရန်နှောင့်အယှက် အဆိုပါ adapter ကျွန်ုပ်တို့၏နားကြပ်များကိုအသုံးပြုနိုင်ရန်လိုအပ်သည်။
မျက်နှာအသိအမှတ်ပြုမှု ဘယ်လောက်အဆင့်မြင့်တယ်ဆိုတာကိုကြေငြာခြင်း အလွန်စိတ်ပျက်စရာ။ ဖုန်းကိုသော့ဖွင့်ခြင်းအတွက်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်သည်။ ပြproblemနာကမှတ်ပုံတင်ထားတဲ့မျက်နှာနဲ့အလုပ်မလုပ်ပါဘူး။ ၎င်းသည်အလွန်လွယ်လွယ်ကူကူ "traversable" ဖြစ်သောကြောင့်အန္တရာယ်ရှိနိုင်သည်။ အဲဒါကိုယုံကြည်စိတ်ချရအောင်လုပ်စရာတွေအများကြီးကျန်သေးတယ်။
လက်ဆောင် adapter မပါဘဲ jack ကို plug ကိုဖယ်ရှားရေး
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » UHANS i8 ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
အန်တိုနီယို Gonzalez Munoz ဟုသူကပြောသည်
Antonio Gonzalez Muñozအားပြန်ပြောပါ
သူက Androsis ကိုပြောခဲ့သည်